गर्मीका बेला खाने स्वास्थ्यबर्द्धक खानेकुरा – Nidar News
गर्मीका बेला खाने स्वास्थ्यबर्द्धक खानेकुरा
Nidar News ९ चैत्र २०७७, सोमबार
पोखरा। गर्मी मौसम शुरु भएसँगै हामीले हाम्रो खानामा केही परिवर्तन गर्नुपर्दछ। गर्मीमा हामीले खाने र पिउने कुराले हाम्रो स्वास्थ्यमा ठूलो असर गर्छ र अलिक लापरवाहीले तपाईलाई बिरामी पार्न सक्छ।
अधिकांश मानिसहरूलाई यस मौसममा डिहाइड्रेशन र भिटामिन, खनिजहरूको अभाव हुन्छ। यस मौसममा यी चीजहरू खाएर तपाईं के स्वस्थ हुनुहुनेछ, यसबारेमा जान्नुहोस् ।
टमाटरमा एन्टीआक्सीडन्ट र भिटामिन सी प्रशस्त हुन्छ। तिनीहरूमा लाइकोपीन जस्ता लाभदायक फाइटोकेमिकलहरू पनि हुन्छन् जसले क्यान्सर जस्ता दीर्घकालीन रोगहरूबाट बचाउछ ।
गर्मी मौसममा घिरौलाको तरकारी खानुहोस् । यसले पेक्टिन भनिने फाइबर हुन्छ जुन मुटुको स्वास्थ्यको लागि राम्रो मानिन्छ। यसले कोलेस्ट्रोल पनि कम गर्दछ।
प्रोटीनयुक्त दहीले तपाईंलाई गर्मीमा शितल बनाउछ । दहीमा पाइने प्रोटीनले पेट भर्दछ र यसलाई खाएपछि लामो समयसम्म भोक लाग्दैन । यस तरिकाबाट तपाईले कुनै पनि स्वास्थ्य बिग्रनबाट बच्न सक्नुहुन्छ। दहीमा प्रोबायोटिक्स हुन्छ जसले पाचन प्रणाली ठीक राख्दछ।
तरबुजाले शरीरलाई चिसो र गर्मीमा डिहाइड्रेशन हटाउन काम गर्दछ। तरबुजामा पानीको मात्रा प्रशस्त हुन्छ । यो खाएपछि चाँडै भोक लाग्दैन । तरबूजामा लाइकोपीन पनि हुन्छ जसले छालालाई घामबाट बचाउँछ।
सुन्तलामा धेरै पोटासियम हुन्छ, जुन गर्मीको मौसममा महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। स्वास्थ्य विज्ञहरूका अनुसार पोटासियम गर्मीको पसीनाबाट बाहिर निस्कन्छ, जसले मांसपेशिहरुमा ऐंठन हुने सम्भावनालाई बढाउँदछ।
यस मौसममा सुन्तला खानेको शरीरमा पोटेशियमको आवश्यक मात्रा राख्दछ। सुन्तलामा ८० प्रतिशत रस हुन्छ जसले तपाईंलाई हाइड्रेट राख्दछ।
ब्याकबेरी र रेस्पबेरीज
बेरीज फाइबरको एक राम्रो स्रोत हो। सानो देखिने बेरी धेरै गुणहरूको खजाना हो। यो भिटामिन सीले भरिएको छ। एक कप बेरीजमा ८ ग्राम फाइबर पाइन्छ।
स्याउ, अन्जीर र नास्पति
यी तीन ओटै फल फाइबरमा धनी हुन्छ । यसमा अधिक पौष्टिक तत्त्वहरू हुने भएकोले यी फलफहरु बोक्रासँगै खाने गर्दछन् । यो खानु अघि राम्रोसँग धुनुहोस्। दुई मध्यम आकारको अञ्जिरमा १।५ ग्राम फाइबर पाइन्छ ।
ग्रीन टि गर्मीको समयमा तपाइँलाई हाइड्रेटेड राख्न काम गर्दछ। एक अध्ययनका अनुसार ग्रीन टि ले क्यान्सरसँग लड्न, मुटुको रोगको जोखिम कम गर्दछ, कोलेस्ट्रोल कम गर्छ र मेटाबोलिज्म ठीक गर्दछ। यदि तपाईं गर्मीका दिनहरूमा तातो पानीमा हरियो चिया पिउन सक्नुहुन्न भने, कुनै समस्या छैन, तपाईं यसलाई चिसो पिएपछि पनि पिउन सक्नुहुन्छ। यो पोषक तत्वहरूले भरिएको छ।
यस मौसममा, हरी पत्तेदार तरकारीहरूको सलाद खानु राम्रो हुन्छ ।
सुन्तला र हरियो तरकारीहरुमा क्यारोटीनोइड हुन्छ जसले शरीरमा भिटामिन ए बनाउन सहयोग गर्दछ। यसले कडा घामबाट हुने छालालाई क्षतिबाट पनि बचाउँछ। तपाईं आफ्नो सलादमा गाजर, खुबानी, तरबजुा, टमाटर, अंगूर, र अण्डाको जर्को जोड्दै यसलाई थप स्वस्थ बनाउन सक्नुहुन्छ।
बदाम, काजू र मुमफली
गर्मीमा, सुख्खा फलहरूको एक मुट्ठी खानु लाभदायी हुन्छ । बदाम, काजू र मुमफली मोनोस्याच्युरेट र बहुअनस्याचुरेटेड फ्याट हुन्छ। यसले कोलेस्ट्रोल कम गर्दछ।
गाउँपालिकाले स्वास्थ्य उपचार खर्च दिने
२८ श्रावण २०७५, सोमबार
नागरिकले गरे स्वास्थ्यचौकीलाई १ लाख सहयोग
१५ श्रावण २०७५, मंगलवार
कोरोना भाइरसः उच्च सतर्कता अपनाउन सरकारको निर्देशन
डा. केसीले सरकारलाई भने- ‘बाहुबली’ शासन बन्द गरियोस् !
२३ जेष्ठ २०७६, बिहीबार
शिविरका लागि धनकुटा अस्पतालको सरसफाई
४ कार्तिक २०७५, आईतवार
चार वटा बच्चा दिईन् सुनिताले
धनकुटामा एकै दिनमा २ सय जनाको निःशुल्क शल्यक्रिया
१२ कार्तिक २०७५, सोमबार